Medusa, ilay misy bibilava an-doha | Fitsangatsanganana tanteraka
Medusa, ilay misy bibilava eo an-dohany
Daniel | | Gresy
jellyfish Izy dia iray amin'ireo olona fanta-daza sy mahaliana indrindra amin'ny angano grika. Izy izay dia iray amin'ireo gorgons telo, miaraka amin'i Stheno sy Euryale, iray ihany amin'ireo telo vavy mahatahotra izay tsy mety maty.
Iza ireo gorgons? Ireto zavaboary goavambe natahoran'ny Grika tamin'ny andro taloha ireto dia vehivavy manana elatra izay fa tsy volo eo an-dohany fa bibilava velona. Na izany aza tsy izany no nampatahotra indrindra tamin'izy ireo. Ny zavatra ratsy indrindra dia, hoy ny angano, ireo sahy nijery ny masony dia nivadika ho vato avy hatrany.
1 Ny gorgons
2 Perseus sy Medusa
Mora ny maka sary an-tsaina ny tahotra izay naterak'ireo zavaboary ireo tamin'ny Grika tamin'izany fotoana izany, izay nanadino ireo angano taloha rehetra ireo. Na ahoana na ahoana, dia tsy maintsy ho nampahery tokoa ny fahafantarana fa nipetraka tamin'ny toerana lavitra ireo gorgons. Amin'ny nosy lavitra antsoina hoe Sarpedon, araka ny lovantsofina sasany; na, raha ny filazan'ny sasany, very tany ho any Lybia (izay nantsoin'ny Grika hoe kaontinanta Afrikana).
Ny gorgons dia zanakavavin'i Forcis sy Keto, roa amin'ireo andriamanitra voalohany indrindra ao anatin'ny theogony grika sarotra.
Izy telo mirahavavy (Stheno, Euryale ary Medusa), dia nahazo ny anarana hoe gorgons, izany hoe "mahatsiravina". Nolazaina momba azy ireo fa ny rany dia nanana fahefana hamelona ny maty, raha mbola nesorina tamin'ny sisiny ankavanana. Fa kosa, ra teo amin'ny ilany havia gorgon dia poizina mahafaty.
Bust of Medusa sokitra nataon'i Gian Lorenzo Bernini tamin'ny 1640. Ity sary sokitra Baroque lehibe ity dia voatahiry ao amin'ny tranombakoka ao Capitoline any Roma.
Miresaka manokana momba jellyfish, tokony holazaina fa ny anarany dia avy amin'ny teny grika taloha Μέδουσα izay midika hoe "mpiambina".
Misy angano tara izay manondro fiaviany hafa ho Medusa noho ireo gorgons roa hafa. Araka izany, tovovavy tsara tarehy Medusa izay nanana nanafintohina ny andriamanibavy Athena nandoto ny iray amin'ireo tempoly natokana ho azy (raha ny filazan'ny mpanoratra romana Ovid dia nanao firaisana tamin'andriamanitra izy Poseidon ao amin'ny fitoerana masina). Ity iray ity, henjana ary tsy mangoraka, dia hanana nanova ny volony ho bibilava ho sazy.
Ny angano Medusa dia kintana amin'ny maro zavakanto nanomboka ny Renaissance ka hatramin'ny taonjato faha-XNUMX. Angamba ny malaza indrindra amin'ny rehetra dia ny hosodoko menaka avy amin'i Caravaggio, nolokoina tamin'ny 1597, ilay aseho amin'ny sary izay lohany amin'ny lahatsoratra. Tato ho ato, ny tarehimarika Medusa dia notakian'ny sehatra vehivavy sasany ho mariky ny fikomian'ny vehivavy.
Perseus sy Medusa
Ao amin'ny angano grika ny anarana hoe Medusa dia tsy azo esorina amin'ny an'ny Perseus, mpamono olona sy mpanorina ny tanànan'i Mycenae. Ilay mahery fo namarana ny fiainany.
Danae, renin'i Perseus, dia notakian'i Polydectes, mpanjakan'ny nosy Seriphos. Na izany aza, nijoro teo anelanelan'izy ireo ilay maherifo tanora. Polidectes dia nahita fomba iray hialana amin'ity sakana manelingelina ity amin'ny alàlan'ny fandefasana an'i Perseus hanao iraka izay tsy misy olona afaka miverina velona: mandeha any Sarpedon ary ento ny lohan'i Medusa, ny gorgon mety maty ihany.
Athena, mbola nampahory an'i Medusa, dia nanapa-kevitra ny hanampy an'i Perseus amin'ny asany sarotra. Ka nanoro hevitra azy izy hitady ny Hesperides ary haka aminy ny fitaovam-piadiana ilaina handresena ny gorgon. Ireo fitaovam-piadiana ireo dia a sabatra diamondra ary fiarovan-doha nomeny rehefa notafihiny herin'ny tsy hita maso. Nahazo kitapo iray avy tany amin'izy ireo koa izy afaka nametraka soa aman-tsara ny lohan'i Medusa. Inona koa, Hermes nampindraminy Perseus his kapa misy elatra manidina, raha Athena tenany no nanome azy ampinga lehibe voaravaka fitaratra.
Perseus mitazona ny lohan'ny Medusa efa tapitra. Antsipirihan'ny sary vongana Cellini, ao amin'ny Piazza de la Signoria any Florence.
Nirongo fiadiana tamin'ity panoply mahery ity i Perseus nirohotra hitsena ireo gorgons. Araka ny vintana dia nahita an'i Medusa natory tao anaty lava-bato izy. Mba hisorohana ny fijeriny izay hamela anao tsy ho kivy, nampiasa ilay ampinga ilay maherifo izay taratry ny sarin'ny gorgon toy ny fitaratra. Noho izany dia afaka nandroso taminy izy nefa tsy nijery ny tarehiny ary notapahin-doha. Teraka tamin'ny vozona tapaka ilay soavaly manana elatra Pegasus sy goavambe antsoina hoe Chrysaor.
Rehefa nahita ny zava-nitranga ireo gorgons hafa dia niainga hanenjika ny mpamono ny rahavaviny. Tamin'izay i Perseus no nampiasa ny fiarovan-dohany tsy hita maso handosirana azy ireo sy amin'ny toerana azo antoka.
Ny mari-pamantarana ny lohan'ny Medusa efa nesorina dia fantatra amin'ny hoe Gorgoneion, izay hita amin'ny fanehoana maro amin'ny ampinga Athena. Nampiasa amulet sy sary sokitra an'ny lohan'i Medusa ny Grika taloha mba hialana amin'ny vintan-dratsy sy ny maso ratsy. Efa tamin'ny vanim-potoana Hellenistika, ny Gorgoneion dia lasa sary be mpampiasa amin'ny mozika, sary hosodoko, firavaka ary koa vola madinika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fitsangatsanganana tanteraka » Medusa, ilay misy bibilava eo an-dohany